अन्त्यमा माधव समूह बन्यो घर न घाटको ! काङ्ग्रेसले नेपाल पक्षको विश्वासको मत नलिने घोषणा – hamrosandesh.com
अन्त्यमा माधव समूह बन्यो घर न घाटको ! काङ्ग्रेसले नेपाल पक्षको विश्वासको मत नलिने घोषणा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने भएपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदको विश्वासको मत आवश्यक नपर्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पत्रमार्फत् मागेको विश्वासको मतका विषयमा पार्टीमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेसँगै नेपाल समूहका सांसदको विश्वासको मत आवश्यक नदेखिएको हो ।
ठाकुर समूहबाट १२ जनाले विश्वासको मत दिँदा प्रधानमन्त्री देउवालाई बुहमत पुग्छ । हाल कांग्रेससँग ६१, माओवादी केन्द्रसँग सभामुखसहित ४९, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १, स्वतन्त्र सांसद १, जसपा उपेन्द्र समूहको २० गरी १ सय ३२ मत सुनिश्चित रहेको छ । यसमा जसपाको महन्थ पक्षका १२ सांसद पनि मिसिदा १४२ मत पुग्छ । विश्वासको मत पाउनलाई १३६ आवश्यक रहन्छ ।
यसअघि संसद् विघटन हुँदा नेपाल पक्षबाट २३ जनाले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आइतबारको विश्वास मत दिने विषयमा क–कस्ले दिने भन्ने विषयमा नेपाल समूहबाट यकिन विवरण आएको छैन । नेपाल समूहका नेता एवं सांसद भीम रावलले भने सांसद पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।